छोराको रहर « Janata Samachar
प्रकाशित मिति : 8 June, 2019 9:51 am
तीन तीन वटी छोरीहरु तामाका मुना झैँ थिए । पढ्न नि अब्बल, कक्षामा सधैँ पहिला हुन्थे । घर नै उज्यालो थियो, हिरा सरको ।
गाउँका जल्दाबल्दा युवा नेता , त्यसमा पनि मा.वि का प्र.अ. पत्नी नि सामाजिक कार्यकर्ता । फेरि कुन्नी कसको रहर या बाध्यता हो ? हिरा सर कि पत्नी दुई जिउ कि भइछन, जस अर्थमा छोरीहरु तरुनी तरुनी थिए, उनिहरुका अगाडि सरम त थियो नै तर छोरीहरु बुझ्ने नै थिए ।
नयाँ युग नयाँ प्रविधिबाट उनको गर्भ जाँच गर्दा छोरा नै भएको जानकारी पाएर हिरा सरको भुइँमा खुट्टा थिएन । पत्नी पनि खुशी नै थिइन ।समय सँगसँगै हिरा सरकि पत्नी अस्पताल भर्ना भइन् ।
आमाको उमेर अलिक बढी भएकाले डाक्टरले नर्मल डेलिभरी नहुने जनाएपछि अप्रेसनका लागि पैंसा जम्मा गरे हिरा सरले । छोराको मुख हेर्न पाउने भएँ भनेर हिरा सर गमक्क थिए । पैसा त जति नि खर्च गर्थे, छोराका लागि हिरा सर ।
बेलुका अप्रेसन भयो । अप्रेसन कक्षबाट बाहिर निस्कँदै हिरासरलाई डाक्टरले बधाई दिए छोरा भएकोमा । तर कसरी यस्तो भयो हँ ? भन्दै डाक्टरले हिरा सरलाई प्रतिप्रश्न गरे । गर्भ अवस्थामा राम्रो हेरबिचार गर्नु भएन कि क्या हो ? के भयो र डाक्टर साब ? शङ्कापुर्ण भावमा हिरा सरले डाक्टरलाई सोधे ।
खोइ अरु त केही भन्न सकिन्न, तर तपाईको नवजात शिशुको कुनै अंग छैन जस्तो लाग्छ । बाँकी त तपाईको छोरा हो आफै हेर्नुहोस । हिरा सर उफ भनेर खुइ काढ्दै भुइँमा थचक्क बसे । अनि गहिरो शंका लागेर हिरा सरले आफ्नो नवजात शिशुलाई हेरुँ की नहेरुँ भनी दोधारमा परे।